Mpihira Indiana Amerikana Miozolomana Mamelona Indray ireo Hira Fanevan’ny Zo Sivily Fahiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2017 4:36 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, 日本語, Español, Aymara, English
Nalaina sary teto i Zeshan Bagewadi. Sary: Avy amin'i Zeshan Bagewadi
Ity tantara avy amin'i Traci Tong ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 13 Febroary 2017. Navoaka eto indray izany noho ny fiarahamiasa eo amin'ny PRI sy Global Voices.
Mbola mitady hira vaovao hatrany i Zeshan Bagewadi. Vao haingana izy nahita hira iray mahafinaritra – saingy tsy tena vaovao izany. Mihoatra ny 45 taona ilay hira, hiran'i George Perkins tamin'ny taona 1970 “Cryin’ in the Streets (Mitomany eny An-dalana).”
Nosoratana ho fanehoan-kevitra tamin'ny famonoana ny mpitarika ny zo sivily Martin Luther King Jr izany, roa taona mialoha.
Saingy resy lahatra i Bagewadi fa hiran'ny tolona zo sivily ankehitriny ihany koa ny “Cryin’ in the Streets”. Ka nampiasainy indray.
-“Mahita olona mandeha eny an-dalana aho, mahita olona mitomany eny an-dalana aho, mahita olona maty eny an-dalana aho. Voadona [aho] … tena tsotra izany, nanohina ny fo izany, ary farany tsotsotra », hoy izy tamin'ny tononkira orizinaly.
Nanakoako tamin'ny zava-niainan'i Bagewadi manokana nandritra ny nanabeazana azy ho Miozolomana ny “Cryin ‘in the Streets”, Indiana Amerikana izy ary teratany tao Chicago. Nihalehibe tamin'ny fihainoana ny rakikira “blues”, “soul” sy hira ara-pilazantsara be dia be nangonin'ny dadany izy: “Otis Redding, Sam Cooke, Curtis Mayfield, James Brown … izay karazana feonkiran'ny fahazazako.”
Mpanao gazety mahaleotena ny rainy, monina ao India, ary avy tao no nanaraka ny hetsika zo sivily tao Amerika. «Namoaka lahatsoratra momba ny fanehoan-kevitra mainty (hoditra) tamin'ny literatiora izy», hoy i Bagewadi. “Nahasarika ny raiko hatrany ny fanehoan-kevitra ara-java-kanto sy mamaky an-dry Langston Hughes, Zora [Neale] Hurston.”
Nahatalanjona tanteraka an'i Bagewadi izany, izay nampifanaraka ny tenany tamin'ny hetsika Black Lives Matter [Misy Dikany ny Ain'ny Mainty], hetsika manohitra ny herisetra sy ny fanavakavaham-bolokoditra mihatra matetika amin'ireo olona mainty hoditra. Mila miaraka amin'ireo nanokatra ny lalana ho anay sy lohalaharana tamin'ny tolona ny Miozolomana ao Etazonia. Ka mila mandray ny tolon'izy ireo isika, mila mandray ny hirifirin’ izy ireo isika.”
Manana fahefana bebe kokoa noho ny teny tsotra ny mozika, hoy izy. «Mihaino an'i Curtis Mayfield mihira ny ‘vonona ny olona, misy fiaran-dalamby mandalo ( ‘people get ready, there's a train a comin.’). Mihaino an'i Mahalia Jackson mihira ny Joshua Fit The Battle of Jericho.’ Raha tsy mampitelin-drora anao izany, dia tsy haiko izay mety hampitelin-drora anao.”